को स्थापना मा व्यापार रूस - सुरु-अप मा रूस, कानूनी प्रकारका संस्थापन - रूसी वकिल
को स्थापना मा व्यापार रूस — सुरु-अप मा रूस, कानूनी प्रकारका संस्थापन — रूसी वकिल
छान्ने जो प्रकार को कानूनी संस्था दर्ता गर्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चरणमा अघि गरिरहेका व्यापार गतिविधि मा रूस. यो प्रकार को कानूनी उपस्थिति हुनेछ प्रभाव सबै गतिविधि सहित, वित्तीय र कर रिपोर्ट, भन्सार र मुद्रा नियन्त्रण । त्यसैले, एक निवेशक विशेष ध्यान दिनुपर्छ निर्धारण गर्न उपयुक्त कर्पोरेट फारम मदत गर्नेछ जो, उहाँलाई आफ्नो लक्ष्य हासिल बैठक गर्दा सबै कानूनी आवश्यकताहरू छ । यो प्रक्रिया स्थापनाका लागि एक कम्पनी रूस मा एकदम राम्रो-विकसित र द्वारा नियमित छन् नागरिक कोड र अतिरिक्त व्यवस्था. संयुक्त स्टक र सीमित दायित्व कम्पनीहरु छन् प्रकारका छन् कि सबैभन्दा बारम्बार प्रयोग गरेर विदेशी लगानीकर्ताले गर्न रूसी बजार प्रवेश र समीक्षा गर्दै. सीमित दायित्व कम्पनी को मान्यता छ रूपमा स्थापित एक कम्पनी द्वारा एक वा एक भन्दा बढी व्यक्ति छ, जसले अधिकृत राजधानी मा विभाजित छ, सहभागिता, चासो, आकार को छ जो. सहभागीहरू को सहन छैन दायित्व गरेर आफ्नो दायित्व तर जोखिम सहन घाटा संग जोडिएको गतिविधि भित्र लागत को योगदानको तिनीहरूले गरे । द्वारा स्थापित हुन सक्छ या त, एक व्यक्ति वा समूह को मान्छे, वा एक रूसी वा विदेशी कम्पनी हो । सहभागीहरू को संख्या मा एक गर्न सक्दैन अधिक. भने को संख्या नाघ्यो, त्यसपछि गर्न विषय छ मा खुला एक वर्ष भित्र छ । को समाप्ति को मा यो अवधि भने, सहभागीहरू को संख्या छ छैन कम भएको, अन्तर्गत अदालतले निर्णय । कम्पनी हुन सक्दैन एकमात्र सहभागी अर्को व्यापार संघ को मिलेर एक इकाइ (एक व्यक्ति वा एक कानूनी इकाइ). न्यूनतम अधिकृत राजधानी नहुन सक्छ भन्दा कम, (लगभग डलर) र कम्तीमा पचास प्रतिशत राजधानी हुनुपर्छ भुक्तानी गर्न पूर्व माछा कम्पनी दर्ता. योगदान गर्न सकिन्छ नगद वा मा-प्रकारको छ । सामान्य सहभागीहरू बैठक उच्चतम छ परिचालक शरीर बनाउँछ कि सबै आधारभूत निर्णयहरू को लागि प्रबन्ध र कायम आर्थिक गतिविधि. भने हिस्सेदार बेच्न चाहन्छ यसको शेयर भाग मा शेयर राजधानी, को हिस्सेदार हुनेछ, प्राप्त गर्न यो प्रोटोकल प्रशोधन संग एक नोटरी साथ, पछि दर्ता संग, यो कर अधिकारीहरूले । निदेशक मंडल, जो निगरानीमा सामान्य गतिविधि. उपस्थिति यो शरीर आवश्यक छैन । गठन को निर्देशक को बोर्ड को शेयरधारकों स्वैच्छिक अभिव्यक्ति हुनेछ कार्यान्वयन गर्न अतिरिक्त नियन्त्रण भन्दा कम्पनी हो । कार्यकारी निकाय (सामान्यतया सामान्य निर्देशक वा प्रबन्ध कम्पनी). प्राथमिक समारोह को कार्यकारी शरीर छ, दैनिक व्यवस्थापन को एक कम्पनी हो । हुनुको साथै जिम्मेवार माछा कम्पनी शेयरधारकों, एकमात्र कार्यकारी शरीर छ, आपराधिक र प्रशासनिक जिम्मेवारी पहिले राज्य । प्रत्यक्ष नियन्त्रण, को रूसी कम्पनी केंद्रित संग एक व्यक्ति निर्देशक — जनरल । यो कुनै कम महत्त्वपूर्ण छ भन्ने विश्वास मा व्यक्ति नियुक्त गर्न यो पोस्ट को सामान्य निर्देशक र एक संयुक्त स्टक कम्पनी एक कम्पनी, छ, अधिकृत छ, जो राजधानी विभाजित छ. एक निश्चित संख्या को शेयर को मालिकको (शेयरधारकों) सहन छैन दायित्व लागि आफ्नो दायित्व, तर स्वीकार गर्न संलग्न जोखिम संग घाटा जोडिएको गतिविधि भित्र आफ्नो शेयर को मूल्य.
को दुई प्रकार छन्: बिक्री को शेयर हुन्छ बिना पूर्व शेयरधारकों को अनुमोदन मा सहित, यो बजार, दुवै भित्र र बाहिर को इलाका को रूसी संघ.
सीमित संख्या को शेयरधारकों, गर्न सकिँदैन जो अधिक
अन्यथा, कम्पनी गर्न विषय छ मा खुला संयुक्त स्टक कम्पनी भित्र एक वर्ष व्यवस्थापन संरचना को एक छ यस्तै व्यवस्थापन संरचना को एक. दुवै खोल्न र बन्द छ गर्न बाध्य छन् दुई परिचालक निकायका: सामान्य शेयरधारकों बैठक र कार्यकारी शरीर छ । यो संग पचास भन्दा शेयरधारकों हुनु पर्छ निर्देशक को एक बोर्ड वा परिषद । यसको विपरीत मा, निर्देशकहरु को बोर्ड मा एक, मुद्दाहरू एक नम्बर सम्बन्धित सामान्य शेयरधारकों बैठक सरुवा गर्न सकिन्छ अख्तियारको को निर्देशक को बोर्ड को एक. यसबाहेक, पर्छ वर्षेनी भइरहेका एक पेशेवर बाहिर अडिट नियन्त्रण र अनुमोदन को आफ्नो वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन छ । शाखा र प्रतिनिधि कार्यालय को विदेशी कानूनी संस्थाहरुको हुन मानिन्छ छैनन् रूसी कानूनी वस्तुहरूको, तर शरीर प्रतिनिधित्व को गतिविधिलाई विदेशी कानूनी इकाइ मा मुख्यालय संग अर्को देश हो । तल तालिका प्रदान एक तुलना दुई प्रकारका: एक प्रतिनिधि कार्यालय छ. एक उपखंड को एक विदेशी कानूनी इकाइ प्रतिनिधित्व जो (मुख्यालय) गतिविधिलाई मा रूस र उतरदायित्व लिनु गर्न सकिँदैन व्यापारिक गतिविधि. मुख्य स्थापना को उद्देश्य को एक प्रतिनिधि कार्यालय छ, बजार अनुसन्धान लागि रूसी बजार र पदोन्नति को व्यापारिक सम्बन्ध बीच टाउको कम्पनी र रूसी कम्पनीहरु । अवधि लागि जो एक प्रतिनिधि कार्यालय स्थापित गर्न सकिन्छ छ एक अधिकतम तीन वर्ष संग, सही को विस्तार । अवधि लागि जो एक प्रतिनिधि कार्यालय स्थापित गर्न सकिन्छ छ, माथि गर्न पाँच वर्ष को सही संग, विस्तार । राज्य शुल्क मा निर्भर गर्दछ अख्तियार अन्तर्गत, व्यवस्थापन संरचना को एक प्रतिनिधि वा शाखा कार्यालय प्रतिनिधित्व को कार्यकारी शरीर मा व्यक्ति को टाउको को शाखा वा प्रतिनिधि कार्यालय छ । टाउको को उपखंड को एक विदेशी कानूनी इकाइ कार्यहरू को आधार मा वकील को शक्ति द्वारा जारी विदेशी कानूनी इकाइ छ । विदेशी कम्पनी नै निर्धारण टाउको को स्कोप अख्तियार । विदेशी कम्पनी हुन सक्छ कुनै पनि समय मा रद्द वकील को शक्ति र स्थानान्तरण यो गर्न अर्को इकाइ छ । एक पटक एक फारम को एक कानूनी उपस्थिति छान्नुभएको छ, यो प्रक्रिया लागि राज्य दर्ता गर्नुपर्ने हुन थाले । अनुसार संघीय व्यवस्था»मा राज्य को दर्ता कानूनी वस्तुहरूको»दर्ता गरिन्छ द्वारा कर अधिकारीहरूले जो फाइल कागजातहरू संग एकीकृत राज्य दर्ता पाँच दिन भित्र (कर अख्तियार मास्को मा — सात दिन).
जब तपाईं दर्ता, एक रूसी कानूनी इकाइ, शेयरधारकों को एक पर्छ पेश दस्तावेज मा व्यक्ति
व्यक्ति अधिकृत साइन इन गर्न आवेदन र पेश कागजातहरू रूपमा उल्लेख छ यो आवेदक छ । भने हिस्सेदार छ, एक कम्पनी को त्यसपछि निर्देशक को प्रश्न मा कम्पनी रूपमा प्रेरित आवेदक छ । भने आवेदक धाउन सक्षम छैन सार्वजनिक अख्तियार दर्ता लागि, कागजात पठाइने सक्छ मेल द्वारा. यस मामला मा, दर्ता कागजात पठाइने यसो ठेगाना को कानूनी इकाइ सिर्जना भइरहेको छ । पछि, निम्न प्रक्रियाहरु पूरा हुनुपर्छ: — प्राप्त दर्ता प्रमाणपत्र संग गैर- धन (पेंशन निधि, चिकित्सा बीमा अनिवार्य कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष) — मामला मा स्थापना, को जमानत मुद्दा दर्ता हुनुपर्छ संघीय सेवा को लागि वित्तीय बजार को रूसी संघ. समय सीमा को दर्ता लागि एक रूसी कानूनी इकाइ निर्भर मा यसको कानूनी संगठनात्मक फारम । — हप्ता लागि, — हप्ता, एक महिना लागि दर्ता शेयर को मुद्दा छ । एक शुल्क को लागू छ जब दर्ता रूसी कानूनी संस्थाहरुको. शुल्क दर्ताको लागि शेयर को प्रकार मा निर्भर गर्दछ शेयर । शाखा र प्रतिनिधि कार्यालय पनि पर्छ राज्य निकायका अधिकृत प्रदान गर्न यस्तो. सामान्यतया, यी अधिकारीहरूले समावेश को राज्य दर्ता कोठामा मंत्रालय मा न्याय को रूसी संघ, चेम्बर अफ कमर्स र उद्योग र विभिन्न को रूस. भने, उदाहरणका लागि, कम्पनी मा लगी छ, शैक्षिक गतिविधि, एक प्रतिनिधि वा शाखा कार्यालय हुन सक्छ संग शिक्षा मन्त्रालयले हो । स्थापना गर्न एक कम्पनी, एक विदेशी निवेशक छ तयार गर्न एक व्यापक सूची को कागजातहरू आवश्यक रूसी व्यवस्था छ । सबै कागजातहरू देखि यो घर देश को विदेशी कानूनी इकाइ हुनुपर्छ र र एक अनुवाद मा रूसी प्रदान गरिनु पर्छ. यो दर्ता लागि समय सीमा एक प्रतिनिधि कार्यालय शाखा को एक विदेशी संस्थासँग लिन्छ एक दुई महिना मा निर्भर गर्दछ, को प्रयोग तीब्रता प्रक्रिया संग अधिकारीहरूले लागि जिम्मेवार रहन दिनुहुन्छ लागि खोल्ने प्रतिनिधि कार्यालय शाखा.
दर्ता अवधि, दर्ता को एक हुनेछ लिन एक महिना संग
यो दर्ता लागि समय सीमा एक प्रतिनिधि कार्यालय शाखा को एक विदेशी संस्थासँग लिन्छ एक दुई महिना मा निर्भर गर्दछ, को प्रयोग तीब्रता प्रक्रिया संग अधिकारीहरूले लागि जिम्मेवार रहन दिनुहुन्छ लागि खोल्ने प्रतिनिधि कार्यालय शाखा. जबकि हरेक प्रयास गरिएको छ को सत्यता सुनिश्चित गर्न यो प्रकाशन छ, यो इरादा छैन प्रदान गर्न कानूनी सल्लाह रूपमा व्यक्तिगत परिस्थिति फरक हुनेछ र छलफल गर्नुपर्छ एक विशेषज्ञ संग र वा वकील
रूस गाइड: एक घर, कुराहरू विचार गर्न एक अनुबंध हस्ताक्षर अघि: रूसी व्यवस्था छ समर्थक-मोहि मा ।